Nepal Dayari | डर लाग्दो मान्छे भेटिए शरिर भरी आलुका दाना जस्तै यो केहो ? १२ बर्ष देखी यस्तै जिन्दगी बिताउदै
डर लाग्दो मान्छे भेटिए शरिर भरी आलुका दाना जस्तै यो केहो ? १२ बर्ष देखी यस्तै जिन्दगी बिताउदै
कार्तिक २४, २०७८ बुधबार १०९६ पटक हेरिएको
काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्छ तर यो सत्य हो ।हामी आफ्नो शरीरमा सानो केही खटेर हुँदा हामीलाई कति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ तर यो व्यक्तिको भने आफ्नो पुरै शरीरमा यस्तो हुँदा कति पीडा हुन्छ होला ।
एकचोटि कल्पना गरौ त हाम्रो शरिरमा एउटा डन्डिफोर आयो भने हामिलाई कति धेरै दु: ख हुन्छ तर यी दृ,श्यमा देखिएका बुवाको शरीर पुरै नै ख,टिराहरु गिर्खाहरु बि-बिराले भरिएको छ । सामान्य ढंगबाट हेर्दा जो कोहिको पनि सा’तो जान्छ ,यस्तो छ अवस्था ।
आखिर कस्तो के रो”ग होला यस्तो ? जन्मिएको चौध बर्ष बाटनै यो रो”गले पि:डि”त भएका बुवालाई अहिलेसम्म पनि यो रो:गबाट छु-ट्का्रा, मिलेन । सुरुमा पे’ट बाट आउन सुरु गरेका गिर्खाहरुले बिस्तारै श’रिरको सबै भागमा फैलिए ।उ”क्त गिर्खाहरु अ:त्याधिक चि’लाउने बु,वा बताउनुहुन्छ ।
थमनबहादुर मगर जो उमेरको हि”साबमा अहिले ५६ बर्षमा लागे । उनी पा-च छोरा र एक छोरिका पिता हुन।सामान्य बाटो सर’सफाइ गरेर आफ्नो जिबिको पार्जन चलाउदै आएका बुवालाई आफ्नो घरको बिहान बेलुकाको छाक टा”र्न नै धौ-धौ छ । बुवाले उ-पचारको बारे नत सोच्ननै पाउनुभयो नत उपचार गर्ने परिवारको मजबुत आर्थिक साम्यर्थ नै छ ।
बाकि यो भिडियो हेर्नुहोस्